Ugbo akwukwo ugbo ugbo n'ubi gi: gini bu ihe omimi na ihe ndi ozo nke na-eto akwukwo nri ndi ozo? - Na-eto eto Peking Cabbage - 2020
Ugbo ọka Chinese
Enwere otutu uru n'ibe Beijing, ọbụna eziokwu ahụ bụ na ọbụnadị na ọnọdụ nke ọkara nwere ike ịnweta ihe ubi abụọ n'oge ọ bụla.
Ozokwa, kabeeji a nwere nnukwu nri dị ukwuu, ọ bụ naanị nri dị ụtọ. Ma, ọtụtụ ndị ka nọgidere na-eguzosi ike n'ihe nye kabeeji nkịtị.
Taa, anyi ga agba mbọ ikwusi ihe omuma banyere odighi ike nke onodu anyi maka uto nke "peking" nakwa na o siri ike idi ya.
N'ezie, anyị agaghị echefu ịkọ mgba ahụ na nsogbu atọ kachasị na-ebili mgbe ị na-azụ ihe oriri a site n'aka ndị na-enweghị ihe ubi: ndị na-agba chaa chaa, ihe ikuku na obe.
Kedu ihe bụ peculiarities nke na-eto eto "peking": okpomọkụ, ihu igwe na akụkụ ndị ọzọ dị mkpa
Anyị na-ahọrọ ala ma dozie ya maka ịkụ mkpụrụ Peking kabeeji
Kedu ihe dị iche iche dị iche iche nke "peking": oge ​​nhazi na mkpụrụ
Mkpụrụ nkwadebe maka akuku n'ala
Anyị na-etinye aka na ịgha mkpụrụ na-akụ mkpụrụ nke Peking kabeeji
Oge ubochi "Peking": mgbe aga n'ihu iji zere akara ngosi
Nhazi usoro: kedu ka ohere ị chọrọ ka ị na-eto eto?
Kedu otu esi echebe Peking kabeeji n'ubi nke aka gị iji nweta oke dị elu?
Olee otu esi emeso pests na oria nke Peking kabeeji?
Esi na Mmiri "Peking": Ịga n'ihu na Mpịakọta
Anyị na-eji nri kabeeji na-eri nri: gịnị ka nri dị mkpa?
Anyị na-eme ka piking Peking na-eme ka ọ kwụsie ike.
Mbibi na nchekwa nke owuwe ihe ubi nke Peking kabeeji
Bekee Beijing: esi kwadebe maka akuku?
Na-akwadebe maka akuku bụ otu n'ime oge kachasị mkpa n'ime usoro dum nke ịkụ mkpụrụ kabeeji. Ma, ọ bụrụ na ọ dị njọ ịkwadebe ihe ndị na-akụ ihe, họrọ ebe ọjọọ na-eto, anaghị eri nri na ala, mgbe ahụ, ị ​​gaghị enwe olileanya maka ezigbo ihe ubi.
Karịsịa n'ihe banyere ịba ụba kabeeji kabeeji, ọ dị mkpa ka ị kpachara anya, ma ọ dịkarịa ala ị ga-enwete onwe gị n'ihu nke a na ọkwa dị ala.
Anyị ekwuola na, na-atụle Peking kabeeji dịka osisi Eshia, ọtụtụ ndị na-eche na ọ dịghị mma maka ịkụ anụ n'etiti etiti elu.
Mana n'eziokwu, ihe dị iche iche, n'ihi na ihu igwe na-ekpo ọkụ nke nwere ogologo ụbọchị, osisi a na-agbapụ akụ na osisi, na-enweghị isi dị mkpa maka ndị ọrụ ubi.
Ya mere, ihu igwe anyị kwesịrị ekwesị maka "ịkụkọta" dịka o kwere omume, ọbụnakwa na-enye anyị ohere ịnweta otu ihe ubi site na mmalite oge opupu ihe ubi, na nke abụọ n'ime ụbịa.
Mmiri kachasị mma maka uto ya site na 13 ruo 20º. N'okpuru okpomọkụ, osisi ahụ agaghị eto ma ọlị, na elu okpomọkụ, ọ ga-agbapụ akụ.
A ga-ahọrọ ebe na-eto eto "peking" anwụ na-acha, ọ bụ ezie na ekwesịghị ichefu na ọkụ ọkụ nwere ike imerụ ya.
Iji gbochie nke a, a na-adụ ndị na-elekọta ugbo nwere ahụmahụ ka ha buru ngwaahịa ngwaahịa pụrụ iche. Ọ nwere ike ịghọ ihe dị oké mkpa mgbe ọ na-eto eto Chinese kabeeji, n'ihi na:
N'okpuru dị otú ahụ a ndo na-eto eto seedlings na seedlings agaghị atụ egwu nke frosts. N'ezie, n'agbanyeghị ezi nkwụsị nke obere okpomọkụ na osisi ndị toworo eto, ndị na-eto eto nwere ike ime nke a.
Azu mmiri dị otú a ga-abụ ebe obibi dị oké mkpa nke kabeeji si ekpo oke ọkụ na anyanwụ.
Nchawa ahụ agaghị agafe ya kpamkpam, na-echekwa kabeeji site na oke mmiri dị n'ime ala. Site n'ụzọ, ọ bụ oke iru mmiri na-emekarị ka osisi a laa.
Ọ bụ ndị iro ha na-emepụta ihe na-abaghị uru n'oge ụfọdụ ka ndị iro ha, bụ ndị iro na-egbuke egbuke, na-enweghị ike ịchọpụta osisi n'okpuru mkpuchi.
Dị ka ị ghọtara ugbu a, ọ ka mma ka ị ghara ịkụ mkpụrụ Peking kabeeji n'elu akwa ndị ahụ ebe mmiri dị nso n'elu. A sị ka e kwuwe, ihe ize ndụ ahụ ga-abụ ọ bụghị nanị na ọ ga-abụ na ọ na-agbanwe nke mgbọrọgwụ, kamakwa n'eziokwu na site na mmiri dị ukwuu, ụwa nwere ike ịghọ ezigbo oyi ma ọ bụ na-ekpo ọkụ, nke na-adịghịkwa achọsi ike maka osisi a kọwara.
Ọzọkwa, echefula ịkọwa kpọmkwem ihe osisi ndị toro n'ubi ahụ tupu. Peking kabeeji kasị mma ga-eto nanị mgbe garlic, eyịm, carrots, poteto na cucumbers.
Ya mere, site na otu akwa si na mmiri ị nwere ike nweta garlic / yabasị / kukumba, na n'oge ụbịa na-eto eto ọzọ.
Banyere ala ala kachasị mma maka ịmalite "peking," azịza ya agaghị arụ ọrụ.
Osisi a nwere ike ịmị mkpụrụ ọma na ala ọ bụla, ọ bụrụ na a na-elekọta ya nke ọma.
Otú ọ dị, ọ ka mma ịhọrọ ìhè, na-amị mkpụrụ ma nwee ike ịgafe mmiri, na-ejide ya ruo ogologo oge (ya bụ, ị ghaghị ikpochapụ ala ụrọ).
Ezi nhọrọ maka ụdị ụdị kabeeji nile bụ loam.
N'ihi na-eto eto seedlings, humus na-abụkarị weere na a aki oyibo mkpụrụ, na nke ikpeazụ ga-ewere okpukpu abụọ.
Nsonaazụ ọma gosipụtara ngwakọta nke ala turf na mgbakwunye nke ego ahụ. Ala dị otú a ga-abụ ezigbo nri maka osisi, ya mere, na ọkụ na ezi ịgbara, seedlings na-apụta na ya n'otu ntabi anya.
Mgbe agha mkpụrụ na-emeghe ala, ọkara otu liter nke humus na obere ego mmiri na-agbakwunye na nke ọ bụla nke ọma, nke na-akpali na-epulite na n'ihu ibu nke kabeeji.
Mgbe ị na-akụ seedlings, a ga-ebu ụzọ kpoo ihe ndina ahụ, na-agbakwunye ya (ọ bụrụgodị na ụra adịghị amị mkpụrụ, mgbe ahụ, ọnụego fatịlaịza kwesịrị ịgbatị).
Ọzọkwa, akwa akwa maka akuku Peking kabeeji adịghị atụ aro. Ọ kachasị mma ime ka dị warara, nke nwere nnukwu mmiri dị n'akụkụ, ebe oke mmiri ga na-asọ.
N'ozuzu, a na-ewere kabeeji Peking kabeeji dịka ihe ọkụkụ n'oge mbụ, ọ dị iche iche dị iche iche. Ya mere, e nwere mmalite ndị na-eto eto n'ihe dị ka ụbọchị 40-55 site na ịgha mkpụrụ nke mkpụrụ, ndị na-ajụ ya - ihe ọkụkụ ahụ na-adabara oriri na 55-60 ụbọchị, na ndị nwụrụ anwụ nwere ike toro ọbụna ụbọchị 80.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ụdị kabeeji Chinese, mgbe ahụ, ndị niile na-elekọta ubi na-ekweta na ihe kachasị mma bụ ndị Dutch. Ka anyị kpọọ aha ndị kasị ewu ewu na ha:
A na - eji ụdị dị iche iche dị ka "Orange Mandarin" (nke kachasị mma na mmiri, cabbages na-enweta ruo 1 kilogram), "Vesnyanka" (cabbages abụghị nnukwu, ma ngwa ngwa ripening, eguzogide ọgwụ), "Asten" (si kụrụ seedlings na vyzrvaniya 1-1.1 kilogram cobs were ihe dị ka ụbọchị 55), nakwa Sprinkin (ọ nwere ezigbo uto ma nwee ike ịchekwa ya ruo oge ụfọdụ mgbe nchịkọta).
N'ime mkpụrụ osisi dị iche iche, "Glass" a na-ewere dị ka ihe kachasị mma (o nwere nnukwu mkpụrụ kabeeji - ihe ruru kilogram 2 n'ibu), "Bilko" (àgwà nke cabbages nke ruru kilogram 1.5 na ezigbo uto), Vorozheya (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụ, mkpụrụ osisi 2 kilogram).
Site na ụdị kabeeji Chinese dị iche iche, ọ dị mkpa iji gụnye "mkpụrụ nke Russia" (onye ndú dị n'ogologo bụ 3-4 kilogram), "Nick" (mkpụrụ ellipsoid nke dị kilogram 3), ị nwere ike ịpụta dị ka kabeeji nkịtị), "Parkin" (" obere mkpụrụ na-eru ihe ruru 1 kilogram, ma nwee ezigbo uto).
Na-akụkwa mkpụrụ osisi kabeeji dị mfe, ọ bụ ezie na ha adịghị achọ ka ha na-azụ.
N'ikpeazụ, a pụrụ iziputa mkpụrụ osisi a zụrụ ala ma ghara ichegbu onwe ha ma hà ga-etolite ma ọ bụ.
Ọ bụrụ na ị na-eto mkpụrụ n'onwe gị ma ọ bụ onye were gị agba ntakịrị, a ghaghị ịmalite ụfọdụ n'ime ha ka ha wee chọpụta na ha kwesịrị ịgha mkpụrụ. Iji mee nke a, a na-etinye ha na mpempe mmiri, a na-ekpuchi ya ma hapụ ya n'ebe dị ọkụ ruo oge ụfọdụ (a ghaghị ịnọgide na-ekpo ọkụ na akwa ahụ mgbe nile).
Dị ka ọ dị, mgbe ụbọchị 3-5 gasịrị, ha kwesịrị ịmalite. Ọ bụrụ na nke a anaghị eme ọbụna mgbe izu gasịrị, ọ ka mma ịchọ mkpụrụ osisi ndị ọzọ.
Ọ na-atọkwa ụtọ ịgụta ntụziaka gbasara kabeeji na-acha ọcha.
Iji malite ịkụ kabeeji Beijing, ọ dị mkpa ka ị mara onwe gị na ụbọchị ịgha mkpụrụ nke osisi ya. Ozokwa, usoro iheomume nke ịgha nkpuru n'usoro ga-adabere ma a ga-enwe akụ n'elu osisi, ma ọ bụ na ị ga-enwe ike ịmalite ihe ubi zuru ezu.
Mana ihe kachasị mkpa abụghị ịtụ ụjọ ihe isi ike, ebe ọ bụ na usoro omume ọdịda dị mfe karịa ka a kọwara.
Anyị ekwuola ugboro ugboro na ị nwere ike ịkụkwa Peking kabeeji ugboro abụọ n'otu oge ma nweta ihe ubi dị mma. Ya mere, oge nke mbụ a na-akụkarị ya na mmiri, nke a na-akụ mkpụrụ ya na seedlings site na njedebe nke March, na nke abụọ - n'oge okpomọkụ, a na-akụkwa mkpụrụ ahụ na njedebe June.
A na-ahọrọ ihe ọkụkụ oge dịka oge nke ụbọchị anaghị adị ogologo oge, ma n'otu oge ahụ, okpomọkụ nke ikuku na ala dị ọkụ ma ọ bụ na-adịghị ọkụ (n'elu 13-20ºOM) na anụ.
Mmiri mbụ ahụ, nke a na - akpọ mmalite oge opupu ihe ubi, na - amalite site n'ihe dị ka 15 ruo 20 April. N'ime oge a, mmiri frosts na-emekarị, nke nwere ike imerụ osisi ahụ nke ukwuu. Iji zere nke a, ọ dị ezigbo mkpa ozugbo ị rute. kpuchie kabeeji na linen.
Ọfọn na-azọpụta site na oyi na-atụ soil mulching.
A na-eji oge okpomọkụ-mgbụsị akwụkwọ akuku nke seedlings nke Peking kabeeji site na July 20 ruo August 10. Ọ ga-enwe oge buru ibu maka ogo zuru oke ma na-aga, n'ihi ya, ọbụna tupu ụfụ mmiri nke mbido mbụ ị nwere ike ijide owuwe ihe ubi nke ọma.
Akuku kabeeji nwere ike ma na-enweghị seedlings. Ke akpa ikpe, mkpụrụ nke a na osisi na-enịm ke akụwa nke ala ka omimi nke 0.5-1 cm. Ọtụtụ ohere maka uto nke seedlings adịghị mkpa, ọ bụ ezie na ọ ka mma idobe mkpụrụ ahụ na anya nke 1-2 centimeters si na ibe.
Mgbe 2-3 ụbọchị, Ome kwesịrị ịpụta, na mgbe ụbọchị 25-30, yana ọdịdị 4-5 epupụta na seedlings, ọ nwere ike transplanted n'ime oghe n'ala.
Ọ bụrụ na ị kpebie ịkụ mkpụrụ ozugbo na ala a na-emeghe, bụ nke a na-anakwere na-eme n'oge okpomọkụ, mgbe ahụ maka nke a ị ga-achọ ịkwadebe oghere pụrụ iche.
Site na ụzọ, nhazi nke oghere ga-adị ka usoro ihe ubi nke mkpụrụ osisi: 25-30 centimeters n'etiti osisi na n'etiti ahịrị (ị nwere ike ịhapụ ohere dị n'etiti ahịrị iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịhazi osisi).
A ga-etinye ọgwụ ọ bụla nke ọma n'otu oge site n'ịwụsa ọkara lita nke humus (compost) n'ime ya, yana ịgbakwunye ihe dịka 2 tablespoons nke osisi ash.
Iji mee ka fatịlaịza tinyekwuo ala ma jiri ngwa ngwa rute mgbọrọgwụ osisi ahụ, mmiri buru ibu na-asọba n'ime olulu mmiri. Ọ bụrụ na ịgha mkpụrụ - ọ dị ha mkpa ka ha tinye aka na miri nke 1-2 centimeters.
Mgbe kere seedlings mkpa ilekwasị anya na ya size, ma ọ dịghị ikpe anaghị lie ya epupụta.
Na-elekọta ihe ọkụkụ, nke onye ọ bụla na-enweghị mmasị nke ukwuu, n'ihe banyere ịba ụba Chinese, ọ dịghị ụzọ ọ bụla ị ga-esi zere ya. Ọ bụ ezie na, n'ozuzu ya, ọ bụghị ihe mkpali, ma pests dị iche iche hụrụ ya n'anya nke ukwuu, ya mere, na-enweghị ihe ndị pụrụ iche, ọ gaghị ekwe omume inwe ezigbo nsonaazụ.
Ọzọkwa, onye ọ bụla na-elekọta ubi na-achọ ike ya niile iji meziwanye ihe si na mkpụrụ osisi ya, bụ nke anyị ga-enyere gị aka ime ya.
Ihe ngbochi kachasị njọ bụ "peking" bụ crossge na slugs. O siri ike ịlụ ọgụ nke mbụ, ebe ọ na-ewetara osisi ahụ nnukwu nsogbu, ọ na-esikarị ike ịmepụta ya.
Maka nke a, ọ kacha mma ịgbaso usoro mgbochi ndị a:
Osisi a kụrụ osisi na okwu ndị dị n'elu, mgbe ụmụ ahụhụ ndị a anọbeghị, ma ọ bụ na ha apụlarịrị.
Eji akwa ákwà a na-etinyeghị na ya maka ebe nchekwa nke Peking kabeeji.
Ọbụna tupu ntuputa nke seedlings, akwa ga-powdered na osisi ash.
Ọ dị ezigbo mkpa ịgbanwe ihe a kụrụ n'ubi n'ụzọ ziri ezi, ọ nweghịkwa ihe ị ga-eme ka ị na-akụ mkpụrụ osisi na-acha ọkụkọ, mọstad na ụdị kabeeji ndị ọzọ.
Ị nwere ike jikọta ọdịbendị, nke ụfọdụ na-enyere aka ịghọ aghụghọ a. Ya mere, a ga-ejikọta kabeeji a na tomato, garlic, eyịm, cucumbers, poteto na ọbụna petunias.
Ọ bụrụ na ihe ndị dị otú ahụ adịghị enyere aka, ọ dị mkpa iji ngwaahịa ndị dị ndụ - "Phyto-ugbo" ma ọ bụ "Bitoksibatsilin", nakwa iji mee ka nrụrụ ha sie ike site na ájá na ntụ na ụtaba. Ọ bụrụ na ị hụrụ otu ọrụ nke ụmụ ahụhụ - jiri kemịkal - "Aktar", "Inta-Vira" (mana ọ ga-abụ ihe na-erughị otu ọnwa tupu owuwe ihe ubi.
Na slugs na-alụ ọgụ aghụghọ. Karịsịa, ọ ga-ekwe omume ịtọpụ akwụkwọ osisi burdock, ebe ha na-eji arụ ọrụ ma ọ bụkwanụ na ha ga-eji aka ha mebie pests. Ke adianade do, kabeeji nwere ike na-etinye ya na ngwakọta nke uyi, nnu, mọstad ntụ ntụ, ose ose.
Ịgbara bụ otu n'ime akụkụ dị mkpa nke ilekọta kabeeji Chinese.
Otú ọ dị, ọ dị ezigbo mkpa ka ị ghara imebi ya na ikpe a, n'ihi na, dịka anyị kwurula, mmiri dị ukwuu nwere ike ime ka osisi ahụ na osisi niile gbanwee. Ya mere, a ghaghị ịkwụsị ndị na-eme ka mmiri ghara ịmịchaa mgbe izu mbụ nke uto (ọ bụ ezie na mgbe ọ na-eto ya na ebe ndị a na-emepe emepe, o yikarịrị ka ọ ga-elekwasị anya n'ọnọdụ ihu igwe).
N'ikpeazụ, a ghaghị imepụta mmiri dị ka otu ugboro n'izu, ọ bụ ezie na ọ bara uru iji mmiri buru ibu zuru oke. Ọnọdụ ọzọ dị mkpa bụ mmiri ga-ekpo ọkụma ọ bụghị ya, osisi ahụ nwere ike ịmeghachi ihe na-egbu mgbu na mgbanwe okpomọkụ.
Otu ndụmọdụ dị mma ga-abụkwa na ihe ndina ahụ ka otu izu gasịrị mgbe a kụrụ ihe nwere ike iji kpuchie ya. Ọ gaghị ejigide mmiri na ala nke ọma, kama ọ ga-aghọkwa ihe mgbochi ibu na akwa nke ahịhịa. N'oge opupu ihe ubi, mulch na-enyekwa nchebe megide ntu oyi.
A na-amalite ịkụzi "Peking" n'ime izu abụọ mgbe a kụrụ osisi na-adịgide adịgide.
Ị nwere ike iji ndị na-esonụ nri, na ngụkọta nke 1 liter kwa osisi:
Mmiri + mullein (1:10).
Mmiri + ụkọ anụ ọkụkọ (1:20).
Mmiri + mmiri (1: 9).
Ọ bụrụ na a kụrụ kabeeji ahụ n'oge opupu ihe ubi - gbanye ya mmiri ugboro atọ, n'oge okpomọkụ - nani abụọ.
Iji mepụta isi dị mma, a na-atụgharị ha na ngwọta: 2 grams nke acid boric 1 liter nke mmiri ọkụ + 9 lita nke oyi.
Ọ ga-ekwe omume ịkwanye seedlings nke Peking kabeeji n'ime otu izu mgbe germination. N'ihi nke a, iko na igbe dị na ya na-ekpughere ìhè anyanwụ, ma ruo oge dị mkpirikpi, a na-ewebata ha ikuku ikuku ka ha wee nwee ike ime mgbanwe na oyi.
Ị nwere ike belata osisi ndị ahụ bụ "Peking", bụrịrịrịrịrịrịrịrịrị.
N'oge ọdịda, ị gaghị eme ọsọ ọsọ, ebe ọ na-atụghị egwu -4ºC.
Ịnwere ike ịchekwa kabeeji ezumike, na-ekpuchi ya na ijide ihe nkiri ma na-ahapụ ya na ime ụlọ na okpomọkụ nke + 5-7 º.